Miscarriage - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
မမဗိုကျတဈယောကျအတှကျ မိမိမှာ ရငျသှေးလေးကို လှယျထားရတဲ့အခြိနျမှာ ဆောငျရ ရှောငျရတာတှလေဲ မြားသလို ကနျြးမာရေးအခကျအခဲတှလေညျး တှရေ့တတျပါတယျ… ဒီထဲကမှ ကိုယျဝနျပကျြခွငျးနဲ့ဆိုငျတဲ့ အကွောငျးလေးကို ပွောပွခငျြပါတယျ…
ကိုယျဝနျပကျြခွငျး ဆိုတာ ?
“ကိုးလလှယျ ဆယျလဖှား” ဆိုသလို ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျဟာ ကာလအတနျ ကွာမွငျ့ပွီး ဒီအခြိနျတှငျး တှရေ့တတျတဲ့ ပွသနာတှထေဲမှာ ကိုယျဝနျပကျြကခြွငျး (သားလြှောခွငျး) ဟာလညျး တဈခုအပါအဝငျပါ….
ကိုယျဝနျ အပတျ(၂၀) မတိုငျခငျမှာ မိခငျ၏ ဝမျးတိုကျထဲမှ လမစသေ့ေးသော၊အသကျရှငျရနျ မဖွဈနိုငျသေးသော ရငျသှေး ထှကျကြ၊မှေးဖှားလာခွငျးကို ကိုယျဝနျပကျြခွငျးလို့ ချေါနိုငျပါတယျ…
ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျတှထေဲကမှ ၁၀-၂၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျဟာ ကိုယျဝနျပကျြကခြွငျး အန်တရာယျကို ကွုံနိုငျပါတယျ… အမြားစုဟာ ကိုယျဝနျ ၁၄ ပတျ(ပထမသုံးလအပိုငျးအခွား)မတိုငျခငျမှာ အဖွဈမြားတာမို့ .. သတိပွုစရာပါ..
ဖြားနာခွငျး တှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
ကိုယျဝနျပကျြခွငျးဟာ မြားသောအားဖွငျ့ သန်ဓသေားဖွဈလာဖို့ အတှကျလိုအပျသော မြိုးဥ (သို့) သုတျပိုးရဲ့ ပုံမမှနျမှု၊ ခရိုမိုဆုနျး လှဲမှားမှုတှကွေောငျ့ ဖွဈနိုငျပါတယျ..ဒါ့ပွငျ မိခငျဟာ
အသကျကွီးခွငျး(၃၅ အထကျအမြိုးသမီးတှမှော ဖွဈနိုငျခပြေိုမြားပါတယျ)
ဆီးခြိုရောဂါ၊ လညျပငျးအကြိတျရောဂါ၊ သှေးနဲ့ဆိုငျသော ရောဂါ ရှိသူ
သားအိမျအနအေထား မမှနျကနျခွငျး၊ခှဲမှေးထားဖူးရာမှ သားအိမျတှငျ အမာရှတျ မြားလှခွငျး
ယခငျ ကိုယျဝနျတှငျး ကလေးမှေးဖှားရခကျခွငျး၊ကလေးပုံမမှနျခွငျး ရှိဖူးသူ
ဝကျသတျ၊ဂြိုကျသိုး၊HIV၊ဂနို ရောဂါပိုး ကူးစကျထားဖူးသူ
အစရှိတဲ့ အခကျြတှကွေောငျ့လဲ ကိုယျဝနျပကျြခွငျး ကွုံရနိုငျပါတယျ… မှေးဖှားပွီး သုံးလအကွာမှာ နောကျထပျ ကိုယျဝနျဆောငျပါကလညျး ပကျြကဖြို့ နှုနျးမြားပါတယျ…
( ဒါ့ပွငျ ကိုယျဝနျဒုတိယသုံးလအပိုငျးအခွားမှာ သားအိမျခေါငျး တိုခွငျး၊ကိုယျဝနျကို ထိနျးထားနိုငျရနျ မလုံလောကျခွငျးကွောငျ့ ရုတျတရကျ ဗိုကျထဲမှ ဖိအားတဈခုဖွဈပွီး ရမှောပေါကျမယျ..ကလေးရော အခငျြးပါ ထှကျကလြာနိုငျပါတယျ…ဤဖွဈစဉျကို ကာကှယျရနျအတှကျ နောကျကိုယျဝနျမတိုငျခငျမှာ သားအိမျခေါငျးပတျလညျအား ခြုပျရိုးဖွငျ့ စကျပိုငျးပုံတှယျကပျထားခွငျး လုပျနိုငျပါတယျ…)
ဒါကွောငျ့ မိမိဟာ သှေးအလှနျအမငျးဆငျးခွငျး၊ဗိုကျအောငျ့ခွငျးတှေ ကွုံရပီဆိုပါက ဆေးခနျးပွသငျ့ပါတယျ.. ဆရာဝနျမှ
သှေးစဈခွငျး အစရှိတာတှနေဲ့ ကိုယျဝနျ ပကျြကခြွငျး ရှိမရှိ အတညျပွုမယျ…
ကိုယျဝနျပကျြကပြွီး သားအိမျတှငျး သန်ဓသေား အပိုငျးအစမြား မကနျြပါက သှေးဆကျဆငျးခွငျးရှိမရှိ ၊တခွားနောကျဆကျတှဲပွသနာ ရှိမရှိ ဆကျစဈဆေးရပါမယျ..
သားအိမျတှငျး သန်ဓသေားအပိုငျးအစမြားကနျြနပေါက သားအိမျလမျးကွောငျးတှငျး ရောဂါပိုးဝငျခွငျး၊ခန်ဓာကိုယျတှငျး ရောဂါ ပြံ့နှံ့ခွငျး စတာတှေ ကွုံနိုငျတာမို့ .. ဆေးရုံတကျပွီး ပိုးသတျဆေးသှငျးခွငျး၊ သားအိမျခွဈခွငျးစတဲ့ ဆရာဝနျညှနျကွားတဲ့ လိုအပျတဲ့ကုသမှုမြား ခံယူသငျ့ပါတယျ။
ကိုယျဝနျခဏခဏ ပကျြကခြွငျး၊ဆကျတိုကျပကျြကခြွငျး ရှိပါက မြိုးရိုးနှငျ့ဆိုငျသော၊သှေးနှငျ့ဆိုငျသော ဆေးစဈဆေးမှုမြား ပွုလုပျသငျ့ပါတယျ..ပွီးလြှငျ လိုအပျသော ဆေးကုသမှုကို ခံယူရပါမယျ…
ကိုယျဝနျပကျြကထြားပါက နောကျထပျ ကိုယျဝနျဆောငျနိုငျသလား?
ပုံမှနျ ကိုယျဝနျ ပွနျဆောငျနိုငျပါတယျ…
ဒါ့ပွငျ ကိုယျဝနျပကျြကခြွငျးဟာ မိမိမှာ မြိုးပှားခွငျးနဲ့ ဆိုငျသော ပွသနာ ရှိနခွေငျး မဟုတျပါ…
နောကျထပျ ကိုယျဝနျပကျြကဖြို့ ရာခိုငျနှုနျးလဲ နညျးပါးပါတယျ
သို့သျော ကိုယျဝနျ ခဏခဏ ပကျြကထြားဖူးမြား အဖို့ကတော့ နောကျထပျကိုယျဝနျယူပါက သခြောဂရုစိုကျသငျ့ပါတယျ… ကိုယျဝနျနုတညျးက သခြော အပျပါ…ပုံမှနျ ဆေးခနျးပွပါ.. တဈစုံတဈရာ စိုးရိမျရပါက ဆေးရုံ ဆေးခနျး အမွနျသှားပွသငျ့ပါတယျ
ဘယျခြိနျမှာ ကိုယျဝနျ ပွနျဆောငျနိုငျသလဲ?
စိတျရော ကိုယျပါ ပွနျလညျကောငျးမှနျရနျ လိုအပျသော အခြိနျတဈခု ယူပါ
ကိုယျဝနျပကျြကခြွငျးကွောငျ့ မိမိကိုယျကို ပွဈတငျတာမြိုး မလုပျပါနဲ့..
အသေးစိတျကို နောကျဆောငျးပါးတဈပုဒျမှာ ဆှေးနှေးတငျပွပေးသှားမှာမို့ My Doctor ကို See First လေးလုပျပွီး စောငျ့မြှျောဖတျရှုပေးကွပါဦးနျော။
မမဗိုက်​တစ်​​ယောက်​အတွက်​ မိမိမှာ ရင်​​သွေး​လေး​ကို လွယ်​ထားရတဲ့အချိန်​မှာ ​ဆောင်​ရ ​ရှောင်​ရတာ​တွေလဲ များသလို ကျန်းမာ​ရေးအခက်​အခဲ​တွေလည်း ​တွေ့ရတတ်​ပါတယ်​… ဒီထဲကမှ ကိုယ်​ဝန်​ပျက်​ခြင်းနဲ့ဆိုင်​တဲ့ အ​ကြောင်း​လေးကို ​ပြောပြချင်​ပါတယ်​…
ကိုယ်​ဝန်​ပျက်​ခြင်း ဆိုတာ ?
“ကိုးလလွယ်​ ဆယ်​လဖွား” ဆိုသလို ကိုယ်​ဝန်​​​ဆောင်​ချိန်​ဟာ ကာလအတန်​ ကြာမြင့်​ပြီး ဒီအချိန်​တွင်း တွေ့ရတတ်​တဲ့ ပြသနာ​တွေထဲမှာ ကိုယ်​ဝန်​ပျက်​ကျခြင်း (သား​လျှောခြင်း) ဟာလည်း တစ်​ခုအပါအဝင်​ပါ….
ကိုယ်​ဝန်​ အပတ်​(၂၀) မတိုင်​ခင်​မှာ မိခင်​၏ ဝမ်းတိုက်​ထဲမှ လမ​စေ့​သေး​သော၊အသက်​ရှင်​ရန်​ မဖြစ်​နိုင်​​သေး​သော ရင်​​သွေး ထွက်​ကျ၊​မွေးဖွားလာခြင်းကို ကိုယ်​ဝန်​ပျက်​ခြင်းလို့ ​ခေါ်နိုင်​ပါတယ်​…
ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​မိခင်​​တွေထဲကမှ ၁၀-၂၀ ရာခိုင်​နှုန်း​လောက်​ဟာ ကိုိယ်​ဝန်​ပျက်​ကျခြင်း အန္တရာယ်​ကို ကြုံနိုင်​ပါတယ်​… အများစုဟာ ကိုယ်​ဝန်​ ၁၄ ပတ်​(ပထမသုံးလအပိုင်းအခြား)မတိုင်​ခင်​မှာ အဖြစ်​များတာမို့ .. သတိပြုစရာပါ..
ဖျားနာခြင်း ​တွေပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။
ကိုယ်​ဝန်​ပျက်​ခြင်းဟာ များ​သောအားဖြင့်​ သန္ဓေသားဖြစ်​လာဖို့ အတွက်​လိုအပ်​​သော မျိုးဥ (သို့) သုတ်​ပိုးရဲ့ ပုံမမှန်​မှု​၊ ခရိုမိုဆုန်း လွဲမှားမှု​တွေကြောင့် ဖြစ်​နိုင်​ပါတယ်​..ဒါ့ပြင်​ မိခင်​ဟာ
အသက်​ကြီးခြင်း(၃၅ အထက်​အမျိုးသမီး​တွေမှာ ဖြစ်​နိုင်​​ချေပိုများပါတယ်​)
ဆီးချို​ရောဂါ၊​ လည်​ပင်းအကျိတ်​​​ရောဂါ၊ သွေးနဲ့ဆိုင်​​သော ​ရောဂါ ရှိသူ
သားအိမ်​အ​နေအထား မမှန်​ကန်​ခြင်း၊ခွဲ​မွေးထားဖူးရာမှ သားအိမ်​တွင်​ အမာရွတ်​ များလှခြင်း
ယခင်​ ကိုယ်​ဝန်​တွင်း ​က​လေး​မွေးဖွားရခက်​ခြင်း၊က​လေးပုံမမှန်​ခြင်း ရှိဖူးသူ
ဝက်​သတ်​၊ဂျိုက်​သိုး၊HIV၊ဂနို ​ရောဂါပိုး ကူးစက်​ထားဖူးသူ
အစရှိတဲ့ အချက်​​တွေ​ကြောင့်လဲ ကိုယ်​ဝန်​ပျက်​ခြင်း ကြုံရနိုင်​ပါတယ်​… ​မွေးဖွားပြီး သုံးလအကြာမှာ ​နောက်​ထပ်​ ကိုယ်​ဝန်​​​ဆောင်​ပါကလည်း ပျက်​ကျဖို့ နှုန်းများပါတယ်​…
( ဒါ့ပြင်​ ကိုယ်​ဝန်​ဒုတိယသုံးလအပိုင်းအခြားမှာ သားအိမ်​​ခေါင်း တိုခြင်း၊ကိုယ်​ဝန်​ကို ထိန်းထားနိုင်​ရန်​ မလုံ​လောက်​ခြင်း​​ကြောင့်​ ရုတ်​တရက်​ ဗိုက်​ထဲမှ ဖိအားတစ်​ခုဖြစ်​ပြီး ​ရေမွှာ​ပေါက်မယ်​..က​လေး​ရော အချင်းပါ ထွက်​ကျလာနိုင်​ပါတယ်​…ဤဖြစ်​စဉ်​ကို ကာကွယ်​ရန်​အတွက်​ ​နောက်​ကိုယ်​ဝန်​မတိုင်​ခင်​မှာ သားအိမ်​​ခေါင်းပတ်​လည်​အား ချုပ်​ရိုးဖြင့်​ စက်​ပိုင်းပုံတွယ်​ကပ်​ထားခြင်း လုပ်​နိုင်​ပါတယ်​…)
ဒါ​ကြောင့်​ မိမိဟာ ​သွေးအလွန်​အမင်းဆင်းခြင်း၊ဗိုက်​​အောင့်ခြင်း​တွေ ကြုံရပီဆိုပါက ​ဆေးခန်းပြသင့်​ပါတယ်​.. ဆရာဝန်​မှ
​သွေးစစ်​ခြင်း အစရှိတာ​တွေနဲ့ ကိုယ်​ဝန်​ ပျက်​ကျခြင်း ရှိမရှိ အတည်​ပြုမယ်​…
ကိုယ်​ဝန်​ပျက်​ကျပြီး သားအိမ်​တွင်း သ​န္ဓေသား အပိုင်းအစများ မကျန်​ပါက ​သွေးဆက်​ဆင်းခြင်းရှိမရှိ ၊တခြား​နောက်​ဆက်​တွဲပြသနာ ရှိမရှိ ဆက်​​စစ်​​ဆေးရပါမယ်​..
သားအိမ်​တွင်း သ​န္ဓေသားအပိုင်းအစများကျန်​​နေပါက သားအိမ်​လမ်း​ကြောင်းတွင်း ​ရောဂါပိုးဝင်​ခြင်း၊ခန္ဓာကိုယ်​တွင်း ​ရောဂါ ပျံ့ နှံ့ ခြင်း စတာ​တွေ ကြုံနိုင်​တာမို့ .. ​ဆေးရုံတက်​ပြီး ပိုးသတ်ဆေးသွင်းခြင်း၊ သားအိမ်​ခြစ်​ခြင်းစတဲ့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ လိုအပ်တဲ့ကုသမှုများ ခံယူသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်​ဝန်​ခဏခဏ ပျက်​ကျခြင်း၊ဆက်​တိုက်​ပျက်​ကျခြင်း ရှိပါက မျိုးရိုးနှင့်​ဆိုင်​​သော၊​သွေးနှင့်​ဆိုင်​​သော ​ဆေးစစ်​​ဆေးမှုများ ပြုလုပ်​သင့်​ပါတယ်​..ပြီးလျှင်​ လိုအပ်​​သော ​ဆေးကုသမှုကို ခံယူရပါမယ်​…
ကိုယ်​ဝန်​ပျက်​ကျထားပါက ​နောက်​ထပ်​ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​နိုင်​သလား?
ပုံမှန်​ ကိုယ်​ဝန်​ ပြန်​​ဆောင်​နိုင်​ပါတယ်​…
ဒါ့ပြင်​ ကိုယ်​ဝန်​ပျက်​ကျခြင်းဟာ မိမိမှာ မျိုးပွားခြင်းနဲ့ ​ဆိုင်​​သော ပြသနာ ရှိ​နေခြင်း မဟုတ်​ပါ…
​နောက်​ထပ်​ ကိုယ်​ဝန်​ပျက်​ကျဖို့ ရာခိုင်​နှုန်းလဲ နည်းပါးပါတယ်
သို့​သော်​ ကိုယ်​ဝန်​ ခဏခဏ ပျက်​ကျထားဖူးများ အဖို့က​တော့ ​​​နောက်​ထပ်​ကိုယ်​ဝန်​ယူပါက ​သေချာဂရုစိုက်​သင့်​ပါတယ်​… ကိုယ်​ဝန်​​နုတည်းက ​သေချာ အပ်​ပါ…ပုံမှန်​ ​ဆေးခန်းပြပါ.. တစ်​စုံတစ်​ရာ စိုးရိမ်​ရပါက ​ဆေးရုံ ​ဆေးခန်း အမြန်​သွားပြသင့်​ပါတယ်​
ဘယ်​ချိန်​မှာ ကိုယ်​ဝန်​ ပြန်​​ဆောင်​နိုင်​သလဲ?
စိတ်​​ရော ကိုယ်​ပါ ပြန်​လည်​​ကောင်းမွန်​ရန်​ လိုအပ်​​သော အချိန်​တစ်​ခု ယူပါ
ကိုယ်​ဝန်​ပျက်​​ကျခြင်း​ကြောင့်​ မိမိကိုယ်​ကို ပြစ်​တင်​တာမျိုး မလုပ်​ပါနဲ့..
အသေးစိတ်ကို နောက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာ ဆွေးနွေးတင်ပြပေးသွားမှာမို့ My Doctor ကို See First လေးလုပ်ပြီး စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော်။
Missed OC Pills